Boorsada Boorsada, Bacda Qaadista Qashinka, Beerta Qashinka Beerta - BAOTE
Mashiinka Beebarka Tooska ah ee Raidial Bidirection Extruder
Mashiinka Xiirashada Digirta Ballaaran
Bacda maydhashada la taaban karo
BAOTE WESUSTRIAL GROUP oo ku taal “peninsula” qurux badan magaalada Qingdao ee dalka Shiinaha waa shirkad cusub oo heer qaran ah oo casri ah oo dhaxalsiisa dhaqanka kana daba tagta hal-abuurnimada. BAOTE Group waxay leedahay seddex waaxood oo hoosaadyo kuwaas oo diiradda saaraya khadka ganacsiga ee kaladuwan.
Marka ugu horreysa waa alaabada birta ah-Dhammaan noocyada caadiga ah iyo biraha aan caadiga ahayn, lowska, mashiinka guryaha lagu dhaqo, boolal iyo biinanka qashinka lagu shubo, weelka birta ah ee ku jira baaxadda BAOTE Industrial Manufacturing Co ,. LTD
Ta labaad waa baco caag ah — Dhammaan noocyada kala duwan ee boorsada boodada, bacda lagu dhaqo bamka laamiga ah, bacda laga saaro asbestos, bacda weyn ee pp; Dhammaantood waxaa soo saaray Hogaamiyaha dhabta ah ee Caaga ah.
Ta saddexaad waa Qingdao Rainbow Tech Co., Ltd, oo ah mashiinka biibiile Precast la taaban karo iyo alaab-qeybiye mashiinada caaga ah. Shayga waxaa ka mid ah gariirka mashiinka sameynta biibiile la taaban karo oo gariira 2005 iyo wuxuu si guul leh u soo saaray mashiinka dhuumaha extrusion extralion extralion kii ugu horeeyay ee taagan sanadka 2012. Khadka la adkeeyay ee la taaban karo ee la taaban karo (PCCP) sidoo kale waa baaxada.
Kala soocida alaabta
Faahfaahinta dayactirka iyo dayactirka alxanka qafis
Su'aasha 1aad: Sideen u yareyn karnaa xirashada qafis alxanka? 1. Waa wax iska caadi ah soo saarayaasha mashiinka alxanka qafis inay xirtaan qaybo inta ay isticmaalayaan. Si loo yareeyo xirashada qaybaha dhexdooda, waa inaan bixinaa ...
Siyaabaha loo yareeyo isticmaalka bacaha
Dib u isticmaal bacaha balaastigga ah: dooro waxoogaa baagag adag ah kuna qaado boorsadaada si aad ugu adeegato boorsooyinkaaga halkii aad ka adeegan laheyd boorsooyinka aad keensato. Bacda dib loo isticmaali karo way fududahay in la qaado ...
Goob Farsamo: Hal-abuurnimadu waxay la xiriirtaa xargo-iyo-loop oo isku xiraya ugu yaraan laba qaybood, sida suunka xubinta hore. Asalka: Jillaab-iyo-suun waa nooc ka mid ah suunka, suunka, ...
Wax soosaarkii ugu dambeeyay
Hel wararkii ugu dambeeyay ee maalin walba la dhiibo!
Na sii emailkaaga oo maalin walba ayaa lagugu cusbooneysiin doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay, si faahfaahsan!
Gawaarida Gawaarida, Qaab dhismeedka, U Bolts, Lag Bolts, Hex handarraabbadeedii, Mashiinka tuuboyinka Gawaarida Gawaarida ah,